बर्षेनी साढे १० अर्बको बिजुली बेच्दै माथिल्लो तामाकोसी, कति पाउँछन् लगानीकर्ताले लाभांश ? ⋆ afno sansar
बर्षेनी साढे १० अर्बको बिजुली बेच्दै माथिल्लो तामाकोसी, कति पाउँछन् लगानीकर्ताले लाभांश ?
प्रकासित : २७ असार २०७८, आईतवार ११:३९
नेपालमा जलविद्युतलाई ‘सेतो हीरा’ पनि भनिन्छ।
सञ्चालनमा आएको १५ वर्षसम्म सरकारलाई तिर्नुपर्ने करमा सहुलियत पाउने र नाफा उच्च हुने हुँदा पनि लगानीकर्ता अहिले जलविद्युत्मा आकर्षित छन्। त्यसको अलवा जलविद्युत कम्पनीको प्रतिफल पहिले नै निश्चित तथा नियमित हुने हुँदा पनि लगानीकर्ताको रोजाइमा यो सेक्टर पर्ने गरेको छ।
आयोजना सञ्चालनमा आएको ३ वर्ष भित्रै नाफामा जाने भएको छ । साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन प्रयोजनका लागि सार्वजनिक गरिएको आव्हानपत्रमा आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ देखि प्रवद्र्धक अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेडले नाफा कमाउन थाल्ने भएको हो । सो वर्ष कम्पनीले ४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ नाफा कमाउने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
आव ०७७/०७८ मा घटेर २ अर्ब १२ करोड र ०७८/०७९ मा बढेर २ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसपछि आम्दानी बढ्ने र ऋण दायित्व पनि क्रमश घट्दै जाने भएकाले नाफामा बढोत्तरी हुने देखिएको छ । कम्पनीले आव ०७८/०७९ मा ६ अर्ब २७ करोड ७२ लाख रुपैयाँ संचित नाफा गर्नेछ । आयोजना सञ्चालन भएको साढे ९ वर्षभित्र कर्जा चुक्ता गर्नेछ ।
संचय कोषले आयोजनामा लगानी गरेवापत लिने कर्जाको ब्याजदर १०.५ प्रतिशत छ । ४ वर्षमा प्रतिसेयर आम्दानी बढेर २७ रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । कम्पनीको चुक्तापुँजी १० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ छ । कम्पनी आव ०७४/७५ र ०७५/०७६ मा नोक्सानमा रहने अनुमान गरिएको छ । आगामी ०७५ बैशाखदेखि तामाकोसी आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन हुने कार्यतालिका तयार पारिएको छ ।
आउदो ४ वर्षदेखि माथिल्लो तामाकोसीले बिजुली बिक्रीबाट वार्षिक १० अर्ब ११ करोड २३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्नेछ । आगामी वर्ष ०७५/०७६ ४ अर्ब, ४ करोड, ०७६/०७७ मा ९ अर्ब ५३ करोड, ०७७/०७८ मा ९ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । आव ०७५/०७६ मा ३ अर्ब १ करोड, ०७६/०७७ मा ६ अर्ब २ करोड, ०७७/०७८ मा ५ अर्ब ९८ करोड र ०७८/०७९ मा ५ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ दायित्व रहने छ ।
४५६ मेगावाट क्षमताको यो आयोजना निर्माण अवधिको ब्याज (आइडीसी) बाहेक ३५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएकोमा डलर महंगो भएको, भूकम्प र नाकावन्दीले समय थप हुदा संशोधित अनुमान लागत बढेर ४९ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो आईडीसी भन्दा बाहेकको हो । काम सुरु गर्दा १ डलर बराबर ८० रुपैयाँ थियो । अहिले बढेर ११० रुपैयाँसम्म पुगेको छ ।
आयोजनाको लागत ७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ थप हुने कम्पनीले जनाएको छ । यसका लागि कम्पनीले ऋणप्रदायक कर्मचारी संचय कोषलगायतसंग छलफल गरिरहेको जानकारी दिएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक २ अर्ब २८ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने छ । आईडीसी बाहेक निर्माण अवधिको ब्याज बाहेक प्रतिमेगावाट १० करोड ८१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खरिद गर्ने छ । आयोजनाको बिजुलीको मूल्य प्रतियुनिट औसत ५ रुपैयाँ ३० पैसासम्म पुग्ने छ । कम्पनीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ४१, नेपाल टेलिकमको ६, राष्ट्रिय बीमा संस्थानको २ र नागरिक लगानी कोषको २ प्रतिशत स्वामित्व छ । यस्तै सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत लगानी रहेको छ l ३ घुम्ती बाट साभार
२७ असार २०७८, आईतवार ११:३९